Fatidra - Wikipedia
Ny fatidra na fati-dra na fato-dra dia fifanekena ataon' ny olona roa tsy misy rohim-pihavanana, nefa te hanova ny fifandraisany maha mpinamana tsotra na maha mifankahalala tsotra azy ho fifandraisana hamafisina amin' ny alalan' ny fandatsahana sy fisotroany na fihinanany ny ran' izy roa tonta, ka lasa fifandraisan' ny iray tampo izany fifandraisan' ny mpifatidra izany.
Ankehitriny dia tsy maro ny olona manao fatidra, eny na dia any ambanivohitra aza. Tsy manavaka ny fatidra na lahy na vavy, na foko inona na foko inona, na aiza na aiza ny faritra niaviana, na inona na inona sarangan' ny mpandray anjara.
Raha hanao fatidra dia mampahalala ny olobe na sojabe eo amin' ny tanàna ireo olona roa te hanao fatidra ireo. Io olobe io no manome ny fankatoavany na tsia amin' ny hanatanterahana ny fatidra. Raha tsy misy ny fankatoavan' ilay olobe dia tsy tanteraka ny fanaovana fatidra. Misy koa anefa ny sasany izay tonga dia manatanterana ny fanaovana fatidra fa tsy miantso na manatona olobe.
Manao ny fombafomba ilaina amin' izany ny olona atao hoe mpitoka izay miantso ny Razana sy ny Zanahary, manozona izay mety hamadika fitokisana amin' ireo mpanao fatidra sy mitsodrano izay mikendry ny hahasoa ny namany ka tsy mamadika fitokisana.
Amin' ny fotoana anaovana ny fatidra dia afaka manasa ny havany sy ny sakaizany ireo olona roa maniry hihavana amin' ny alalan' ny fatidra. Afaka manasa ny mpiara-monina ihany koa izy ireo. Raha maro no manatrika dia tsy ireo olona roa ireo ihany no lasa mpihavana fa ny fianakavian' ny roa tonta.
Izay iray mamadika fatidra, izany hoe mamadika fanekena, dia inoana fa hiharan' ny ozona ka mety hisy fiantraikany amin' ny fianakaviany izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatidra&oldid=1043276"
Voaova farany tamin'ny 25 Janoary 2022 amin'ny 13:36 ity pejy ity.